Kooxo hubeysan oo xalay ku dishey Kismaayo mid kamid ah nabadoonada Jubbooyinka
Updated About:213 days ago 0
Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay xalay fiidkii ku dileen magaalada Kismaayo mid kamid ah nabadoonada ugu caansanaa.
Koox ku hubeysan bastoolado ayaa la sheegay in ay ku dileen Nabadoon Axmed Sheekh xaafada Via Afmadow saladii maqrib kadib isagoo markaas ku sii socday gurigiisa.
Xaalada magaalada Kismaayo ayaa ahayd mid kacsan, iyadoo dilkan uu qeyb ka yahay dilal tan iyo markii ciidamada huwanta ay soo galeen magaalada horaantii bishan lagu dilayay magaalada Nabadoono iyo dad kale.
Qaar ka mid ah ciidamada huwanta eek u sugan magaalada kismaayo ayaa gaaray halka uu dilku ka dhacay waxayna halkasi ka sameeyeen baaritaano hase ahaatee lama soo sheegin cid ay u qabteen dilka nabadoonka iyadoo halkaa ay ka baxsadeen dadkii ka dambeeyey falka nabadoonka.
Nabadoon Axmed sheikh ayaa lagu wadaa in saaka lagu aaso qabuuraha magaalada Kismaayo iyadoo dilalka soo noqnoqday ee loo geysanayo nabadoonada iyo dadka kale ay walaac ku abuurtay dadka ku nool magaalada Kismaayo.